Antony fitsangatsanganana any Andalusia ary hijanonana hiaina | Vaovao momba ny dia
Carmen Guillen | | Almeria, Tanànan'ny Espana, Cordova, Granada, Huelva, Malaga, Sevilla
Ny olon-drehetra, iza koa ary iza no ambany, isika dia manana toerana izay tiantsika handosirana indraindray. Antsoinay hoe "fitoerana masina" ireo toerana ireo, izay iasanantsika ny baterintsika rehefa ananantsika antsasaky ny saika foana. Izy ireo dia toy ireo zoro angovo izay mampita fandriampahalemana amintsika, izay tiantsika hiverina foana ary, raha azontsika atao, dia mijanona sy miaina tsy misy fisalasalana isika.
Azo antoka fa manana iray amin'ireo toerana ireo aho, ary soa ihany ho ahy, mitovy amin'ny toerana nahaterahako sy ny toeram-ponenako io: Andalusia. Mety ho lahatsoratra somary nahitana lohahevitra noho io zava-misy io, saingy zavatra vitsy no tsy… Ary raha tsy mino ny anton'ny fitsangatsanganana any Andalusia ianao ary mijanona hipetraka eo, inona no holazaiko aminao, avia mitsidika ary jereo ny tenanao.
Iray tsirairay, ny antony
Andalusia dia manana ny morontsiraka Espaniola misy azy ireo ny ankamaroan'ny morontsiraka tsara indrindra any Espana: ny Ranomasimbe Atlantika sy ny Ranomasina Mediterane dia mandro ny fasiny, fotsy sy fotsy ary miankandrefana ary misy vatolampy atsinanana. Noho izany dia mora ny mandehandeha manodidina an'i Huelva, Malaga, Cádiz (raha tsy hiteny afa-tsy telo) ary hahazo fofona ranomasina ... Ho antsika izay teraka tamin'ny onja, ny fananana ny ranomasina teo akaiky teo dia toy ny "famonjena ".
Noho ny fifalian'ny olony. Satria olona manana toetra misokatra, mahafinaritra ary mifampiresaka isika. Satria raha very amin'ny arabe tery ianao na tsy fantatrao hoe aiza no toerana tsy maintsy alehanao, dia tsy hanana fotoana hitarihana anao sy hanampy anao ...
Ho an'ny toetrandro mahafinaritraNa dia marina aza, amin'ny tapaky ny volana aogositra dia hanana fotoana ratsy ianao: mafana be amin'ny roa na efatra tolakandro. Aza matahotra anefa fa matetika ny alina dia mangatsiaka, indrindra any amin'ny morontsiraka, izay misy rivotra marin-dranomasina mazàna mamirapiratra sy mamelombelona ny rivotra iainana.
Noho ny kolontsaina manan-karena ananantsika. Satria maro ny olona nandalo teto (Fenisianina, Romana, Arabo, ...) mandao ny soritry ny tantara isan-taona ary tsy hanana toerana na dia antsasaky ny taona aza ianao handehanana hatrany amin'ny faran'ny farany Andalusia mahita ny rehetra mahafinaritra izany tsangambato sy tranobe malaza (Ny Moskein'i Córdoba, La Giralda any Seville, The Alhambra any Granada, sns.).
Satria mifanohitra amin'ny ranomasina isika: koa manana tendrombohitra sy lanezy isika ao amin'ny tanànan'ny Granada mahafinaritra. Raha tianao ny fanaovana ski sy ski amin'ny oram-panala amin'ny ankapobeny, eto Andalusia dia tsy hanaisotra izany aminao ianao. Manana ny Resort ski Granada ianao, izay isan-taona dia feno ny mponina sy ny mpizahatany.
Satria manana isika natiora velonatoa azy Valan-javaboary Doñana, izay ahitantsika ireo karazana voaaro toy ny lynx sy ny maro hafa toy ny flamingo sy karazam-borona, serfa, bitro, bibilava sns.
Ny habetsahan'ny tanàna tsara tarehy fa manana be dia be isika ao amin'ny faritry ny Costa toy ny ao amin'ny Sierra. Tsy hisy toerana ao amin'ity lahatsoratra ity hanome anarana azy rehetra, koa manasa anao izahay hitsidika Andalusia ary hizaha azy ireo ho anao.
Ho an'ny gastronomy: Ny tanànan'ny Andalusia tsirairay avy dia samy manana ny lovia mampiavaka azy ao, ary iza no manan-karena sy matsiro kokoa! Tsy afaka mitsidika an'i Andalusia ianao ary hiala raha tsy manandrana ny ham-boalobony, ny frezy, ny oliva oliva, ny hazondamosiny, ny coquinas-ny, ny sakafony, ny divainy ... Manana betsaka izahay Kintana Michelin eo amintsika. Te hahafantatra anarana vitsivitsy ve ianao? Kisko Garcia, Abantal, La Costa, Skina, ankoatry ny hafa.
Satria noho ny fananana manana sakan'ny efitra aza isika, ao an-tanànan'i Almeria, izay niasa ho toerana ho an'ny seho maro avy amin'ny sarimihetsika sy andian-tantara, toy ny malaza "Game of thrones" raha tsy hiteny afa-tsy ny iray sy ny ankehitriny izay fantatry ny ankamaroantsika rehetra.
Ho an'ny masoandro mody mahafinaritra, amin'ny hazavana ao Huelva Raha ny tena manokana dia maharitra ela kokoa izy ary ny lanitra mavokely rehefa manomboka milentika dia tena mahafaly ny maso. Tsy satria tanànako io, fa izy kosa ny masoandro mody tsara tarehy indrindra Hitako tamin'ny fiainako (hatreto).
Ho an'ny foara sy fety. Satria toy ny olon-drehetra, dia hainay koa ny mifalifaly ary manana fotoana fialamboly izahay. Maro amin'ireo foara misy antsika, raha tsy be indrindra, no eo anelanelan'ny lohataona sy ny fahavaratra, noho ny toetr'andro. Mankanesa any amin'izy ireo ary mifalifaly toy ny Andalosiana iray hafa.
satria teraka teto i flamenco, satria ity ny fandrian-jaza. Ary araka ny fantatsika rehetra, karazana mozika niampita sisintany izy io, ary tonga hatrany Japon aza. Raha tianao ny flamenco ary te hankafizinao dia amporisihinay ny manodidina an'i Granada na Jerez de la Frontera, any Cádiz… Afaka miaina zavakanto ianao avy eo.
Tena mila manome anao antony bebe kokoa hitsidihana an'i Andalusia ve izahay? Betsaka noho ny ampy izy ireo fa tsy izy rehetra! Sahinao ve ny mahita ireo tsy hita?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Antony fitsangatsanganana any Andalusia ary hijanonana velona
Curro puerite dia hoy izy:
Raha hitsidika na handany fahavaratra angamba aho. Fa efa nandeha niaina aho ary maty noho ny rikoriko. Tsy misy fahamatorana any am-piasana, tsy misy fahamatorana amin'ny zavatra rehetra, be ny tavoahangy ary bebe kokoa ny zorron. Tsy mety amin'ny ireo izay manam-bola kely.Faritra mampihomehy any Eropa ao amin'ny tatitra PISA sy ny faritra feno mpangalatra.
Mamaly an'i Curro puerite
Alice dia hoy izy:
Tena tsara tarehy tokoa izy io, saingy sariaka ihany ny olona raha mitsangantsangana ianao. Avy eo izy ireo no olona ratsy indrindra hitako. Mpanararaotra, mpangalatra, tsy mahalala fomba, kamo. Tsy mamporisika ny hiaina aho raha mila kalitao sy fiainana milamina.
Ahoana ny fahalalàn'ny Andalusia ilay lahatsoratra fa ara-dalàna, tsy afaka mifarana be loatra. Mikasika ny filentehan'ny masoandro dia aleoko i Cádiz (tsy hita koa ny tendrombohitra sy ny tanàna fotsy).
Mikasika ireo fanehoan-kevitra. Ny ilazana fa mpangalatra ny Andalosiana ary toa kamo matetika ny miteny ahy. Niara-niasa tamin'ny olona avy amin'ny faritra hafa aho ary nahita mpangalatra maro noho ny eto, fa avy any daholo no…. ny mieritreritra fa an-tapitrisany maro no toy ny efa fantatsika tamina tanàna na tanàna dia ny hahatonga azy ireo hijery azy.
Nohemi dia hoy izy:
Ny Andalusia rehetra dia tsara tarehy satria avy any aho, toa tsy ampy fanajana sy kolontsaina ny filazako ireo zavatra ireo momba ny Andalusia, eto dia manao hetsika fety amin'ny tavoahangy sns ianao satria tsy mila mangidy foana ary mandritra ny fotoana kelikely. dia tena tsara ny manapaka sy miasa raha marina izany fa saika ny firenena rehetra dia mitovy na ratsy kokoa
Valio i Nohemi
Ny mponina any Andalusia dia miavaka amin'ny fitsaboana azy ireo, ny fahasambarany ary ny fifandraisany. Teraka tany Madrid aho, ary nanam-bintana aho nandany fotoana kely niaraka tamin'ny zanako tao Malaga. Nanome fiadanam-po ahy sy izay rehetra nahasambatra anay tamin'izany tanàna izany ...
Malahelo ny lokon'ny lanitra sy ny fisondrotan'ny ranony…. Tsy misy toerana tsara kokoa ho ahy. Raha mila mikimpy ny masoko aho ………
Micko dia hoy izy:
Tany Seville nandritra ny 8 volana aho, ary nahafinaritra. Avy eo mitety ny fiarahamonina, izay tsara tarehy. Ireo mpangalatra ary, tsy haiko, tsy nanana ireo olana ireo aho, raha ny tena izy dia heveriko fa natahotra ahy izy ireo, dia noho ny halavako .. Ankehitriny fantatro fa te hipetraka any indray aho, fa ahoana ? Tsy haiko raha mendrika ny mitady asa, raha tsy misy mpampita vaovao Espaniôla satria hisy amiko? Eto amin'ny misy ahy dia tsy tiako izany, tsy mifanaraka fotsiny aho, ary tsapako fa eo amin'ny toerana iray ihany aho ary mandeha ny taona. Enga anie ka teraka tany Andalusia aho. Ny toerana misy azy fotsiny, ny jeografia, dia misy angovo lehibe lehibe. Ary raha ny momba ny toetrandro dia aleoko 3 volana hiaretana ny hafanana noho ny 10 volana mangatsiaka, ary matetika dia orana sy rahona tsy mijanona. Manantena aho fa hampiala ahy tsy ho ela amin'ny tany izay itondrako ato am-poko - ny Andalusia ahy.
Mamaly an'i Micko